Funny – Cele Channel
1) မ​နောက်​ပါနဲ့ ဆရာမရယ်​ ဆရာမ ။ ။ က​လေးတို့ ဒီ​နေ့မနက်​ပိုင်းမှာ ​နေ့တဝက်​ပဲ ​ကျောင်းတက်​ ရမယ်​ ။ က​လေးများ ။ ။ ​ဝေး​ဟေး ။းဆရာမ ။ ။ ကျန်​တဲ့ ​နေ့တဝက်​ ကို​တော့ ည​နေ​မှ တက်​ရမယ်​ ။ က​လေးများ ။ ။ ဟွင့်​ ။ Credit _ သန်​၄ကို (2) အ​ပျော်​ဆုံး ‘ လ ‘ ဆရာမက ​ကျောင်းသား​တွေကို ​မေးတယ်​ Teacher – ​ကျောင်းတက်​ရတဲ့ ‘ လ​ ‘ တွေ မှာ ဘယ်​ လ ကို အ​ပျော်​ဆုံးလဲ […]
Posted on March 12, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
​ယောင်္ကျားးယူတာ ဖင်​ခံတတ်​ရုံနဲ့ မရဘူး…
​ယောကျာ်းယူတာ ဖင်​ခံတတ်​ရုံနဲ့ မရဘူး……??? တချို့ ထမင်းဟင်း မချက်​တတ်​တာကို ကြွားပြီး Share ပြ​နေကြတာ အံ့သြတယ်​…??? ဘယ်​​ယောကျာ်း မှ​တော့ အမြဲတမ်း ​ခေါက်​ဆွဲပြုတ်​နဲ့ မစားနိုင်​ဘူး….??? ” မန်​မန် တူတူပုန်း “မဲ့ ဘဝ​တော့ ဘယ်​​ယောက်ျားမှ မ​ရောက်​ချင်​ဘူး….??? သူတို့အ​မေ လက်​ရာ​လောက် ​မ​ကောင်း​နိုင်​ပေမဲ့ စားလို့ရတဲ့ အ​နေအထား​လောက် ​ထိ​တော့ စားချင်​ကြတာပဲ​လေ….??? ​ယောက်ျား တစ်​​ယောက်​နဲ့ က​လေး​တွေနဲ့ အိမ်​တစ်​ခုကို တာဝန်​ယူဖို့ သူတို့​စောက်​ဆံ​တွေ အကုန်​ခံပြီး တင့်​တင့်​တယ်​တယ်​ ယူထားတာ….??? ဖင်​ခံဖို့ပဲ လက်​ထပ်​တာ ဆိုလဲ ဘယ်​ယူ​တော့မလဲ သူတို့လဲ ဖာပဲသွားချမှာ​ပေါ့…??? ကိုကိုက ​စော​စောထ သဲက ​နေဖင်​ထိုးမှထမယ်​ တို့ ကိုကိုက အဝတ်​​လျှော်​ ချစ်​က ကိုရီးယားကား ကြည့်​မယ်​တို့…. ​စောက်​​ […]
Posted on March 7, 2018 Author Cele	Comment(0)
ကမ္ဘာ​ကျော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက အလွဲများ
ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်အချို့ထဲက အလွဲတွေကို သတိထားမိတာဖြစ်ပေမယ့် တချို့က ရုတ်တရက်မို့ သိမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် တချို့အလွဲတွေက ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင် လွဲမှားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒါတွေကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.Twilight Twilight ရုပ်ရှင်ကို သေချာကြည့်မိရင် မင်းသမီးက ကားစက်နှိုးတဲ့ အခန်းမှာ ကားမှန်မှာ ကင်မရာပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ ဒါရိုက်တာရဲ့ အရည်အချင်းကိ်ု ကျစေတဲ့အတွက် ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2.Inglourious Basterds Inglourious Basterds ရုပ်ရှင်ကားမှာတော့ ဂျာမာန်ဗိုလ်ဟာ တခန်းထဲမှာပဲ အခန်းဆက်နေရာမှာ ရင်ဘတ်က တံဆိပ် ပါလိုက် မပါလိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ 3.Avatar Avatar ရုပ်ရှင်ကားမှာ Jake က သူ့ရဲ့ ပေါင်းမိုးထဲက အဖုံးကို လှန်တဲ့ အချိန် ဘေးမှာ ဝှီးချဲမရှိနေပါဘူး။ငုတ်တုပ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဝှီးချဲက အလိုလို ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ […]
Posted on March 4, 2018 Author Cele	Comment(0)
သင် အသောက်အစားရှိလား ဘယ်အတိုင်းအတာလောက်အထိ မူးခဲ့ဖူးလဲ Limit ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အထိ ပလပ်ကျွတ်ခဲ့ဖူးပါသလား ဒီအောက်မှာတော့ အမူးလွန်ကာ ပလပ်ကျွတ်တဲ့ အနေအထားရောက်ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ ပုံစံတွေကို ဖေ်ာပြပေးထားပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ထုံထိုင်းပြီး မလှုပ်နိုင်ဖြစ်နေပြီ ။ လမ်းမကြီးက သင့်အတွက် အိပ်ရာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလေ အိမ်ထဲဝင်ဖို့ထိ အားကုန်သုံးခဲ့ပြီးပြီ အိပ်ရာပေါ်ရောက်အောင်သွားဖို့ကတော့ အရမ်းခက်ခဲသွားပြီ အိုခေစားပွဲခုံကလည်း စောင်လိုပဲ အရမ်းကိုနွေးနေရော ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းအုံးနဲ့ ကိုယ် အိပ်ရုံပဲ အင်္ကျီတော့လဲဝတ်လိုက်တာပဲချိတ်လေးမဖြုတ်မိတာတစ်ခုပဲ ဒီအချိန်မှာ အန်ဖတ်တွေနဲ့ အိပ်ရတာလည်း ဘယ်လိုမှကိုမနေတာ.အေးဆေးပဲ ကဲ သင်တို့ရော ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကျွတ်လေ့ရှိပါသလဲ (ပလပ်) မျှဝေခဲ့ပါဦး CHAN (ရွှေအင်းလေး)
Posted on March 4, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
ပြောစရာစကားမရှိလောက်အောင် စွံ့အသွားစေတဲ့ ကားမတော်တဆတိုက်မှုဓာတ်ပုံများ
ဘယ်လိုတောင် မောင်းလို ဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာလဲ နားမလည်နိုင်ဘူး [email protected]
ဆယ်လီတွေရဲ့ပို့စ်တွေကို လက်တွေ့ဘဝနဲ့ယှဉ်ပြီး ဟာသဗားရှင်းပြောင်းရိုက်ထားတဲ့အခွီးပုံများ
Instagram က ဟာသဆယ်လီတစ်ဦးဖြစ်သူ သြစတေးလျအမျိုးသမီး Celeste Barber ဟာ ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဟာသဗားရှင်းနဲ့ ပြန်ရိုက်တင်ရင်းနဲ့ နာမည်ကြီးလာသူတစ်ဦးပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက သူမဟာ ဆယ်လီများစွာရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဟာသဗားရှင်းပြန်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း သူမဟာ ဆယ်လီတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို တကယ့်ဘဝက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး အသစ်အသစ်သော ရယ်မောဖွယ်ရာ ဗားရှင်းတွေ ပြောင်းလဲလိုက်ပြန်ပါပြီ။ အောက်မှာ သူမရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို ရှုစားလိုက်ကြရအောင်ပါ။ White (Shwemom) Ref: Bored Panda
Posted on March 3, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
Facebook ပေါ်တွင် နေ့ စဉ်တင်သော ပဲ ဓါတ်ပုံ ပိုင်ရှင် အမျိုးအစား များ
မတ်ပဲ မတ်တပ် ရပ်ပြီး ပဲပေး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ပဲနီစိမ်း အစိမ်း သက်သက် လူကြားထဲ တွင် ပဲပေးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ဗိုလ်စားပဲ ဗိုလ်ဆန်ဆန် ဝတ်စားပြီး ပဲပေးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ပဲခြမ်း မျက်နှာ တစ်ခြမ်းပဲ ဖော်ပြပြီး ပဲပေးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ပဲကြီးစေ့ ကင်မရာအား စေ့စေ့ ကြည့်ပြီး ပဲပေးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ကြယ်ပဲ အိမ်သာထဲ ၊အလန်းထဲ မှန်ရှေ့ မှာ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ပုံ့ကို ပဲပေးပြီး ဓာတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ စားတော်ပဲ ဘီလူး သံပရာသီး စားထား သဖွယ် မျက်နှာ အနေအထားနှင့် ပဲပေးပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်သူ ? […]
မင်္ဂလာဦးညကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူမှ အမေထံ ပို့လိုက်တဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် စာတစောင်
သမီးဖြစ်​သူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအပြီး အမေဖြစ်​သူက “သမီး မင်္ဂလာဦးည ဘယ်လိုဖြစ်လဲ အမေ့ကို ပြောပြ ပြောရမှာ ရှက်ရင် စကားဝှက်သုံးပြီး စာပို့ လိုက်” ” ဟုတ် အမေ” နောက်ရက်ကျ သမီး ဆီကစာတစ်စောင် ဝင်လာတယ် “အမေ MAI-Yangon-Bangkok ပဲ” ဒဲ့ ။ အဲ့ဒါနဲ့အမေဖြစ်သူလည်း ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာသိရအောင် MAI ရုံးကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးတယ် “MAI ရန်ကုန် ကနေ ဘန်ကောက်က လေယာဉ် အကြီးစားတွေ ဖြစ်ပြီးတစ်ရက် ၅ ကြောင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ပါတ်မှာ ၇ ရက်လုံး နားရက် မရှိပါဖူး။ လေယဉ်တစ်ခါ ပြေးဆွဲချိန် ၄၅ မိနစ် ထိ ကြာပါတယ်။” အဲ့ဒါ ကြားပြီး တော့ အမေဖြစ်​သူလည်း […]
Posted on March 2, 2018 Author Cele	Comment(0)
ပြုပြင်မှုတွေများစွာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က အချောအလှဓာတ်ပုံများရဲ့ နောက်ကွယ်
အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသာမက ကိုယ်နဲ့သိတဲ့သူ၊ မသိတဲ့သူတွေရဲ့ပုံများစွာလည်း မြင်တွေ့ရစမြဲပါ။ အဲ့ဒီမှာ အပြင်ကရုပ်ရည်နဲ့ အင်တာနက်ပေါ်ကရုပ်ရည်နဲ့ မတူဘူးဆိုတာတွေလည်း ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ နည်းပညာအဆင့်မြင့်လာတဲ့အမျှ အင်တာနက်ပေါ်က ဓာတ်ပုံတိုင်းကို ယုံကြည်လို့မရတော့ပါဘူး။ အောက်ကပုံတွေက သက်သေပါပဲ။ ခမ်းမူး (ရွှေအင်းလေး)
Posted on February 26, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)
မနေ့ညက one championship အောင်လရဲ့ညာခြေကန်ချက်နဲ့ဘရာဇီးလဲကျပြီး အောင်လနိုင်ခဲ့တယ်။ ပွဲအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲကျင်းပရာ ဘရာဇီးကစားသမား မာချာဒိုက သတင်းထေါက်တစ်ဦးအမေးကိုယခုလိုဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။ ” ကျတော်မြန်မာနိုင်ငံအနေအထါး ရာသီဥတု နေသားကျဖို့ ရန်ကုန်မြို့ကို ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ ကစပြီး ၃/၄ လကြိုရောက်နေခဲ့တာပါ။ ကျတော် လုံးဝအနိုင်ယူပြီး ခါးပတ်ချန်ပီယန်ဆုယူနိုင်မယ် ဆိုတာလုံးဝယုံကြည်မိတယ်။ ကျတော်နဲ့ထိုးမဲ့ စပါးအုံး အောင်လကသေးသေးပါ မဖြုံပါဘူး ကျတော်လုံးဝမဖြုံပါဘူး ။ ကျတော့်ခန္ဓာကိုယ် ဘော်ဒီမာဆယ်တွေကြည့်ပါ ပရိသတ်တွေသိပါ တယ်။ ကျတော်အေးဆေးထိုးသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ကျတော် အောင်လရဲ့ညာခြေစောင်းဒဏ် ခံရလဲပြိုကျလဲဆိုတော့ ခုတလောအရမ်းခေတ် စားသွားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ဂျိုးဖြူပိုက်က “ချီးစ်ရေ ” ကို ၃/၄ လသောက်လိုက်ရလို့ ကျတော်ခုခံမှူ ဆရာဝန်ကသာ ထုတ်မပြောရင်ကျတော်မသိ နိုင်ပါဘူး။ အနိုင်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ခုဆရာဝန် စကါးကြောင့် ကျတော်သောက်ရေအပေါ်သံသရ […]
Posted on February 24, 2018 Author Cele	Comment(0)